समाचार - टेनिस बल मेशिन बिना, र कुनै भित्ता बिना तपाई एक्लै के अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ?
टेनिस बल मेशिन बिना, र कुनै पर्खाल बिना तपाई एक्लै के अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ?
धेरै गल्फर्सले सोध्यो: टेनिस शूटिंग मेशिन बिना तपाई अरू के अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ?
"तीन संख्या" अभ्यास विधि
१ गति अभ्यास
टेनिस खुट्टा मुनि एक वास्तविक खेल हो। राम्रो गति बिना, टेनिस कुनै आत्मा छैन। तपाई एक्लो हुँदा पास अभ्यास निश्चित नै राम्रो विकल्प हो। केवल खेलिनको लागि केहि उपकरणहरू तैयार गर्नुहोस्।
विशिष्ट अभ्यास विधिहरूका लागि, कृपया ऐतिहासिक लेखहरू सन्दर्भ गर्नुहोस्: टेनिस चपलता, गति, र गतिको बृहत अभ्यास, कसरी तपाईंलाई डोरी भर्याउने र लचक ब्यान्डहरू प्रयोग गर्ने सिकाउनुहुन्छ!
यदि कसैले बल फिड गर्दैन र ब्याटि practice अभ्यास गर्न चाहन्छ भने नि? तपाईं केवल आफैंलाई फाल्न सक्नुहुन्छ!
अगाडि बढ्नुहोस्, शटको तयारीको लागि आफ्नो शरीर बदल्नुहोस् र यो स्थिति कायम राख्न, बल तपाईंको अगाडि degrees 45 डिग्री फ्याक गर्नुहोस्, र त्यसपछि बल्लमा हिर्काउन ब्याट स्विंग गर्नुहोस्।
एसएलआरको लागि पनि त्यस्तै छ, बल-स्विing्गि the बल फ्यान्डिंग तयार स्थिति कायम राख्नको लागि खुट्टाको साथ-साथ-साथ खुट्टा सँगसँगै कदम। फोरहेण्ड विपरीत, एसएलआर र्याकेटको तलबाट बल फ्याँक्छ।
बललाई डबल उल्टोमा फ्याँक्नु सब भन्दा गाह्रो छ, र छोटो अवधिमा टास गर्ने र हिट गर्ने सुसंगत कार्य पूर्ण गर्न गाह्रो छ।
अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो काँधमा फर्कनुहोस् र बल हिट गर्नका लागि तयार गर्नुहोस्। यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाईं आफ्नो हातले बायाँ हातले र्याकेटलाई समात्नुहोस् र बललाई तपाईंको दाहिने हातले टस गर्नुहोस्। किनकि दाहिने हात शरीरको अगाडि दाहिने हो र प्रमुख हात हो, मात्र आन्दोलन मात्र सहज छ, तर फाल्ने गुणवत्ता पनि उच्च छ। बल फ्याक पछि, तालीको हात समात्नुहोस् र र्याकेट समात्नुहोस् र ब्याट स्विंग गर्नुहोस्।
यदि बल ताली बिना नै फ्याकियो भने, बललाई फेंकने र स्विing्ग प्रतिबन्धित हुनेछ।
फिक्स्ड-पोइन्ट सेल्फ-फ्याकिंग र सेल्फ-प्लेन मास्टर गरेपछि, तपाईं पार्श्व आन्दोलन वा अपस्ट्रोक जस्ता अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ वा फोरह्यान्ड र ब्याकह्यान्डको साथ बदलीमा बल टस गर्नुहोस्।
The. बल राख्नुहोस्
बललाई बेल्टमा राख्नुहोस् (तपाईंको दरबारको तर्फ झुकाइ), बललाई प्राकृतिक रूपले गिर्नुहोस् प्रतिद्वन्द्वीको सानो नक्कल राखेको दृश्य अनुकरण गर्न, त्यसपछि र्याकेटलाई हल्का ढल्काउनुहोस्, बललाई जालमा हुक गर्नुहोस् र यसलाई पास गर्नुहोस्। नेट रेखाको नजिकको क्षेत्रमा दुई सानो बल बास्केटमा, हातले बल फिर्ता राख्नुको अभ्यास अत्यन्त व्यायाम गरिएको छ।
Exercises. अभ्यासलाई सुदृढ पार्दै
एउटा खुट्टामा उभिनु र तल्लो कम्मरमा कप स्ट्याकिंग गर्दा ब्यालेन्स सुधार गर्न राम्रो प्रशिक्षण प्रभाव हुन्छ।
ठोस बल टसिंग प्रशिक्षणले प्रभावकारी रूपमा शरीरको कोर शक्तिलाई मात्र बढाउन सक्छ, तर बललाई अगाडि बढाउने र बल हिट गर्ने भावनाको अनुभव गर्न सक्दछ।
केटलबेल प्रशिक्षण तल्लो शरीरबाट माथिल्लो शरीरमा शक्तिको प्रसारणको अनुभव गर्नको लागि उत्तम अभ्यास हो।
तपाईं पनि खुट्टा को निरपेक्ष शक्ति प्रशिक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
अभ्यास गर्न चिह्नित चटाई प्रयोग गर्नुहोस्, बिभिन्न अभ्यास मोडहरू परिवर्तन गर्न जारी राख्नुहोस्, र खुट्टाको तलवाहरूको चपलता सुधार गर्नुहोस्।
जब तपाईं एक्लो हुन्छन्, तपाईं पनि बल हिट गर्न वा बल फ्याँक्न र समात्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, जसले बललाई मात्र व्यायाम गर्न सक्दैन, तर राम्रो कौशलको रूपमा कार्य गर्दछ।
बललाई हावामा फ्याँकेपछि, आफ्ना हतियारहरू सिधा गर्नुहोस्, र्याकेट टाउकोलाई सिधा उभ्याउनुहोस्, र्याकेट अनुहार बलमा बन्द गर्नुहोस्, र रकेटलाई सिंक्रोनमा तल झर्ने गति र बलको प्रक्षेपक्रमको साथ सार्नुहोस्। अन्तमा, छातीको स्थिति बारे तपाइँको नाडी घुमाउनुहोस् र र्याकेट अनुहार समतल राख्नुहोस् ताकि बल लगभग उछाल बिना रैकेटमा झर्दै छ।